हत्केलाले छोप्न खोजिएको सुर्य समान हिन्दुत्व - USNEPALNEWS.COM
-साध्वी पद्माश्री किङ्करी
हामी सनातनी सन्तान भएकोमा हामी सबैमा सनातन ज्ञानको मूल छ, जुन अब फुट्न मात्र बाँकिछ। कति त फुटि सकेको पनि छ, मात्र धारमा बग्न सकेको छैन। कहिलेकाही अन्यौलमा छौ जस्तो पनि लाग्छ। तर हाम्रो संस्कार , गहन ज्ञान ले संयुक्त भएर , बिज्ञान सम्मत पनि छ भन्ने वैज्ञानिक रुपले समेत प्रमाणित हुँदै गएको छ। जुन हामी सनातनी हरुको निमित्त गौरवको विषय पनि हो। यसको श्रेय अहिलेको आधुनिक विज्ञान र प्रबिधिलाई पनि जान्छ, किनकी हाम्रो सनातनी हिन्दु मूल्य मान्यता प्रबिधिको विकास सँगै अझ व्यापक हुँदै गएको आभाष सायद सबैलाई भएकै छ।
यश अघि हाम्रा ज्ञान संकुचित थिए। सर्बसाधारण हामी अनभिज्ञ थियौ। सनतनी संस्कार हामीमा थियो।तर मूल ज्ञान भने थिएन। यसरी मुख्य सनातन ज्ञान किन र कुन अभिप्रायले प्रचार प्रसार हुन सकेन? त्यसको अंग्रेज साम्राज्य कालिन शासन सत्ता वा व्यक्तिगत प्रतिस्ठाको स्वार्थ या कुनै धार्मिक राजनितिक कारण हुन सक्ला तत्कालिन परिप्रेक्ष्यमा , उदेश्य र अभिप्राय हिन्दु सनातन धर्मलाई केवल कर्म काण्ड र भजन किर्तन कै अन्यौल मा भुलाएर अंग्रेज साम्राज्य सँगै पश्चिमा बाइबलिक साम्राज्य स्थापित गर्ने मनासयले होकि भन्ने शंका व्यक्त गर्न लाई ठाउँ प्रसस्त छ। नत्र यो बिशाल , यो महान धर्म, हिन्दु सनतनी बेद शास्त्र हरु अहिलेका बिज्ञान का आधार हुन। अहिले पनि विज्ञान धेरै बच्चा नै छ। वेद सम्पुर्ण छ। सनातनी छ। उत्पत्ति देखि नैछ। अपरिवर्तित , अखण्ड र अक्षुण्ण छ। यो अपरिमार्जित छ।
जल र ज्ञान यी दुबै सरल र तरल हुन्छ। उच्च तह बाट उत्पन्न हुन्छन अनि ओरालो बगेर समतलमा फैलिन्छन ..। विशाल भएर फैलिन्छन र महासागर बन्ने गर्छन। ज्ञान पनि उच्च चेतना बाट उत्पन्न हुन्छ अनि जन जन को मन मन मा फैलिन पुग्छ। त्यसैले त ज्ञान ले पुर्ण व्यक्ती जसमा ज्ञानको विशालता छ! सागर झै धैर्य शाली ! करुणा मयि, हुन पुग्छ। हाम्रो लागि अर्को गौरव को कुरा यो पनि हो कि, जति पनि सनातनी ज्ञानको पहिलो मूल यहि हाम्रो हिमालय को भूमी बाट फुत्यो र त्यस्को बिशालता यसको फैलावट भने भारत मा सम्म हुन पुग्यो। यो स्वभविक पनि हो।
किनकी तरल समतलमा नै हो फैलने, अनि उत्पत्ती हुने उच्चतामा नै हो । हिमालय मै हो, त्यसैले केवल नेपाल भुमी मात्र मुख्य रुपमा अति पबित्र र सनातन उद्गम भुमी हो। यो भुमी चेतनाको उत्पत्तिको मूल भूमी भएकै कारण यो भुमी मूल भुमी हो। तर यदि यहि मूल लाई नै थुन्ने समापत पार्ने कार्य हुँदै गए , यहाँ प्रलय हुनेछ, विनाश हुनेछ। सुन्दा हाँस्यस्पद लाग्न सक्छ। तर सत्य हो। यदि मस्तिष्क नै नरहे शरीर सग्लै स्वस्थ नै रहे पनि त्यो काम लाग्ने होला त ? हुन्न नि। हो त्यस्तै हो नेपाल सम्पुर्ण बिश्वको चेतनको मूल मस्तिष्क हो, यदि यो विस्वकै एक मात्र सनातन भुमी पवित्र भुमी, देव भुमी नरहने हो भने यो विश्व नै एउटा लास जस्तो हुनेछ। देव भुमी रहेकै कारण सायद यो भुमी सनातनी बाहेक को आधिपत्य मा रहन परेन। सानो मुलुक भएर पनि नेपालले पूरा विश्वको साम्राज्य बृटिसको सामराज्य,जहाँ सुर्य अस्ताउदैन थियो , परस्त गरेकै थियो। सामना गरेकै थियो, समसुद्दिन लगयतका मुगल साम्राज्य ले पुरै भारत खाएको बेला पनि नेपाल सुरक्षित नै रहयो। समसुद्दिनको आक्रमण यहाँ पनि नभएको हैन।
तर परास्त भएर आधिपत्य जमाउन सकेन। दक्षिणले त भौगोलिक विकटताको कारण सकेन भनेर मानौला, तर उत्तर्को चीन सङ पनि त नेपालले २ पटक ठुलै युद्द गरेकै हो। अझ विकट भौगोलिक युद्द अभ्यास भएका चिनियाँ समेत ले यहाँ हैकम जमाउन सफल भएनन। यसको मतलब हाम्रो विरता मात्रै थियो? युद्ध मा त्यस्तो जादुको छडी हुन्थ्यो र? हामी माथी आक्रमण गर्न आउने कायर थिए? हामी तिक्ष्ण दिमागका लडाकु थियौ र? हैन केवल हाम्रो विरताले त्यो विश्व विजेताहरु रोकिएका थिएनन। यहाँ सनातन देखि नै दैविक आशिर्वाद थियो। गोरखनाथको प्रत्यक्ष आशिर्वाद थियो। मुक्तिनाथको आशीर्वाद थियो.. यो आफैमा सनतनी देव भुमी थियो। त्यसैले न पहिले यो कसैको अधिनमा रह्यो र अब कहिले रहने नै छ। कुनै दिन विज्ञान आफैले यो स्वीकार गर्नेछ कि नेपालको भुमिमा अन्तरिक्षको सदा प्रभाव रहिरहने छ ।
“Nepal is only one holy land of the Earth. ” नेपाल एक मात्र पृथ्विको पवित्र भूमी हो । यो बिश्व चेतनाको उद्गम बिन्दु हो। यो ज्ञानको मूल भुमी हो। यो बिश्वको शिर हो। यो मुक्तिनाथ , शालिग्राम को भूमी हो। हामिले पश्चिमा जस्तो भौतिक प्रगती गरेक छैनौ। भौतिक प्रगती नै प्रगती होइन। हामी सँग ज्ञान छ भएका कुरा म प्रगती हुनु पर्छ। अब सधैं संस्कार मा अल्झेर हुँदैन। अब ज्ञान ले प्रदिप्त हुनु पर्छ पहिले हामी आफै। आफू ज्ञानले बलेर सारा बिश्वलाई बाल्दै जानू पर्छ प्रकशित गर्दै जानू पर्छ। जसरी हामी अहिले पश्चिमा या भनौ विकसित मुलुकका उत्पादन र विकास भोग्न लालयित रहन्छौ। आज को दिनमा हामी जतिसक्दो ती भौतिक बिकसित उत्पादन भोग्न सक्छौ त्यति नै समृद्ध भएको महसुस गर्छौ।
बास्तबमा यो हामी गलत गरिरहेका छौ। बत्ती मुनिको अँध्यारो भन्ने उखान यहाँ चरितार्थ भैरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामिले हाम्रो ज्ञान लाई उजागर गरि उत्पादन गर्नु छ। ताकी त्यो ज्ञान भोग्न हर कोहि लालायित रहुन । ज्ञानको उत्पादन के हो त ? शान्ति , आत्मिक सुख, आत्माको बोध, प्रश्न्नता , भाइचारा, सत्य आचरण , सभ्यता, बिनम्रता, करुणा, मानवता, अनि इस्वर को स्वरुप बोध, यो हो हामीले गर्न सक्ने, हामिले विश्व लाई दिन सक्ने उत्पादन । मात्र हामिले संकुचित रहेको ज्ञान सबैको लागि सहजीकरण गरि पहुच मा राखिदिना साथ , धार्मिक अतिक्रमण स्वतस्फूर्त हराउन जान्छ। यसरी अहिले संगठन बनाएर प्रतिकार गरिरहनु पर्ने अवस्था नै हुदैन। अहिले हरेक कोण द्वारा प्रतिकारको निमित्त तत्पर लडिरहेका हामी रितिरिवाज , धर्म सस्कृती , मुल्यमान्यता बुझेका त छौ। तर ज्ञान बाट भने विमुख नै छौ। हामिलाई कृष्ण लिला राम्ररी थाह छ। तर कृष्ण कै उपदेश गिता दर्शन बाट कति अनभिज्ञ छौ।
प्रचारको नाममा जानाजान नकारात्मकता फैलाइरहेका छौ तर जीवन नै बदल्ने मुखय ज्ञान बाट चै विमुख छौ। यो विडम्बना को कुरा हो। तर अब यस्तो उस्तो भनेर गुनासो गरेर समय व्यतित गर्नु भन्दा, कसरी हाम्रो मूल विद्या , मूल ज्ञान सबै सनातनी हरुको लागि सहज पहुँच मा हुने बनाउने? अनि सनातन प्रती वैर भाव राखिरहेका अन्य विद्रोहिको तेज बध गर्न अझ तेजस्वी भएर कसरी प्रकाशित हुने भन्ने मुख्य योजना रहनु पर्छ। संस्कार कै नाममा , कृष्ण भजन मै एउटा असनातनी आएर नाचिदिदैमा मख्ख परेर विजेता महसुस नगरी, अब हरेक सनतनी हिन्दु ले घरका हरेक सदस्य मा गिताको ज्ञानले प्रकाशित गर्न जरुरी छ। बिस्तारै प्रतिस्पर्धात्मक ज्ञान बोध गर्ने कार्यक्रम सुरुवात गर्नु पर्छ। ताकी ज्ञान प्रती निखार हुँदै जावोस। पुजा पाठ भजन किर्तन त छदैछन तर यसैमा अलमल नभै ज्ञान प्रचार प्रसार मा बढी जोड हुनु पर्छ अब भन्ने मलाई लाग्छ।
हाम्रो सनातन ज्ञान यति गहन यति विशाल छ कि यसको चर्चा गरेर कहिले सकिन्न। अझ कयौ रहस्य खोतलिन बकि नै होला, अहिले जे जति छन ती त केही पनि होइनन् सायद । उहिलेका बोधी ऋषिमुनी हरुको श्रुति, हेर्नुस त जहाँ यस्तो गहन सत्य ज्ञान कसरी लुकेका छ्न , ती श्रुति शब्दका रुपमा यसै सुनिएका हैनन, एउटा नाद, अन्तरीक्ष बाट आउने ध्वनी तरङ्ग लाई शब्दमा रुपान्तरण गरेर लेखिएका हुन वेद पुराण।पहिले सुन्दा बिस्वास लाग्दैन थ्यो। असम्भव लाग्थ्यो, अहिले हामिले सुन्ने रेडियो टेलिभिजन पनि ध्वनी र दृस्य लाई तरङ्ग मा रूपान्तर गरेर फेरि त्यही तरङ्ग लाई ध्वनी या दृश्य मा रुपान्तरण गरे जस्तै हैन त? त्यो बेला कति अध्यात्म विकास भएको रहेछ त अनुमान गरौ। अब हामी यो पबित्र भुमी बाट यस्तै अध्यात्मिक प्रविधिको विकास गर्न खोज अनुसन्धान सुरु गर्न सक्छौ। यी सब सम्भव छन। अन्तरिक्ष का यस्ता असंख्य तरङ्ग हरु पत्ता लगाउनु छ, हाम्रा वेद पुराण मा भएका लेखिएका कुरा सबै सत्य र साचो र सम्भव छ। बिना भौतिक प्रबिधी, अध्यात्मिक प्रविधीको विकास यो पवित्र सनातनी हिमाली भुमीबाट हुनेछ।
अधिकमास अर्थात मलमास किन हुन्छ ?
सुनिल उलक October 8, 2020
जब धर्म सकीन्छ तब मानिसको अस्तित्व पनी सकिन्छ: साध्वी पद्माश्री किङ्करी
अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध : हुवावेविरुद्ध फेसबुकले लियो कडा एक्सन